Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad U Baahantahay Inaad Ka Ogaatid Xaalada Gumaysiga Itoobiya?
Maxaad U Baahantahay Inaad Ka Ogaatid Xaalada Gumaysiga Itoobiya?
Posted by ONA Admin	/ November 6, 2016
Qoraal dheer oo uu soo diyaariyay wargayska caanka ah ee Daily Vox kana soo baxa wadanka Konfur Afrika, dad badani ay ku taxan yihiin ayaa waraysi gaar ah oo meelo badan taabanya layeeshay Gudoomiye Kuxigeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) Dr. Mohamed Ismaciil Cumar, iyo Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Hassan Muxumed Macalin oo ayaantan socdaal shaqo kujoogay wadank Konfur Africa .
Wargaysku wuxuu qoraalkiisa ciwaan ugu dhigay “What you need to know about the situation in Ethiopia.”? Wariyaha ayaa waydiiyay masuuliinta JWXO su’aalo badan oo ku saabsan xaalada murugsan ee Itoobiya guud ahaan.
Masuuliinta JWXO ee waraysigan lala yeeshay ayaa si waafi ah uga jawaabay su’aalihii uu wargaysku waydiiyay madaxda JWXO. Waraysiga oo dheeraa waxaad kaga bogan kartaan isagoo faah faahsan mareegtan hoose.